I-China BT101F Intelligent Dispensing Peristaltic Pump ifektri nabahlinzeki |Ukuhola
I-BT101F Intelligent Dispening Peristaltic Pump
Ibanga lokugeleza: 0.0001-720 ml/min
Inombolo enkulu yesiteshi:4
I-BT101F ehlakaniphile yokukhipha iphampu ye-peristaltic isebenzisa isikrini sokuthinta se-LCD esinombala esibonakalayo nesicacile esibonakalayo, esisebenza kalula.Isetshenziselwa kakhulu ukulinganisa okunembile kanye nokusatshalaliswa koketshezi.Uma udinga ukunemba okuphezulu lapho ukhipha, imodi yokukhipha ivolumu iyatholakala.Uma kudingeka ukusebenza kahle kokukhiqiza okuphezulu, imodi yokukhipha isikhathi ilunge kakhulu.Uma ufuna ukuhlukanisa uketshezi nenani lezingxenye ezilinganayo, imodi yokukhipha ikhophi ingaba ngcono.Lapho usebenza kumodi yokugeleza, kuyafana nepompo elihlakaniphile lokugeleza kwe-peristaltic.Sebenzisa ubuchwepheshe obuhlakaniphile bokulawula izinga lokushisa ukuze unciphise umsindo osebenzayo.I-RS485 interface, njengokwamukela iphrothokholi yokuxhumana ye-MODUS, kulula ukuxhuma nezinye izinto zokusebenza, njengekhompyutha, isixhumi esibonakalayo somshini womuntu kanye ne-PLC.
♦Isibonisi se-LCD sombala, isikrini sokuthinta kanye nekhiphedi yokusebenza.
♦Isistimu yesofthiwe ye-LF-Touch-OS, esebenza kahle futhi ezinzile, enemodi enhle yokusebenzisana nekhompyutha yomuntu, ukwenza ngokwezifiso umkhiqizo okulungile nokuthuthukiswa.
♦Izinhlobo ezintathu zemodi yokusabalalisa: imodi yokukhipha ivolumu, imodi yokukhipha isikhathi, imodi yokukhipha ikhophi.
♦Gcina ngokuzenzakalelayo amaqembu amahlanu amapharamitha okusebenza.
♦Ubuchwepheshe obuyigugu bokulawula be-engeli ejikelezayo yemoto bukhuphula ukunemba kokusabalalisa uma kuqhathaniswa nemodi yokukhipha isikhathi evamile.
♦Qala/yima, indlela ebuyiseleka emuva, isivinini esigcwele, lungisa isivinini, inkumbulo yesimo (inkumbulo yokwehlisa amandla).
♦Ukulungiswa kwesivinini kungu-0.1 rpm.
♦Bonisa futhi ulawule izinga lokugeleza, buthelela ivolumu yokukhipha ngokuzenzakalelayo.
♦Umsebenzi wokugeleza wokulinganisa.
♦Uhlelo lochwepheshe bokusebenza luqondisa abasebenzisi ukusetha amapharamitha ngendlela efanele.
♦Ubuchwepheshe obuhlakaniphile bokulawula izinga lokushisa bunciphisa umsindo osebenzayo.
♦Izinga likagesi langaphandle eliphansi kakhulu lilawula ukuqala/ukuma, isiqondiso esibuyiseleka emuva kanye nomsebenzi wokukhipha kalula, isihlukanisi esihlanganiswe ngokubonakalayo, i-analog yangaphandle ilungisa isivinini sokuzungezisa.
♦Isixhumanisi sokuxhumana se-RS485, iphrothokholi ye-MODBUS iyatholakala, kulula ukuxhuma ezinye izinto zokusebenza.
♦Isakhiwo sokuhlukanisa esinedekhi ekabili yangaphakathi, ibhodi lesifunda elinoqweqwe oluqondile lilenza livikeleke uthuli futhi livikele umswakama.
♦Isici esikhulu sokulwa nokuphazamiseka, ububanzi bokufakwa kwamandla kagesi, okwamukelekayo endaweni yamandla ayinkimbinkimbi.
♦Izindlu zepulasitiki ze-ABS, ukubukeka okuhlelekile kokudala, kuhle futhi kulula.
♦Ingakwazi ukushayela iziteshi eziningi nezinhlobo ezahlukene zamakhanda epompo.
♦Ukuqalisa kokulawula ukushintsha konyawo lwangaphandle kokumisa ivolumu yokukhipha.
Okwedlule: I-BT600S Basic Variable-Speed ​​Peristaltic Pump
Olandelayo: I-BT600F Intelligent Dispening Peristaltic Pump
Ibanga lokugeleza 0.0001-720 ml/min
Ibanga lesivinini 0.1-150 rpm
Isikhathi sokuphumula 0.05mL-9999L
Ivolumu yokusabalalisa 1-999,”0″ umjikelezo ongapheli
Ukukhipha isikhathi sokuphumula 0.1-999.9S/Min/H, iyunithi yesikhathi iyalungiseka
Ukusetshenziswa kwamandla ＜30W
Ubukhulu (L×W×H) 257mm×180mm×197mm
Ukugcwalisa Ithebula Lereferensi Yesicelo
Ukugcwalisa Ivolumu Ye-Fluid Ikhanda Lephampu Ithubhu Isivinini(RPM) Isikhathi sokugcwalisa Iphutha lokuthembeka(%)
50uL I-DG6-1 0.25×0.89mm ＞90 6.66 ±2
0.1mL I-DG6-1 0.5×0.8mm ＞90 ＜3.33 ±2
0.2mL I-DG6-1 0.5×0.8mm ＞90 ＜6.06 ±1
0.3mL YZ15 13# ＞500 ＜0.6 ±2
0.5mL YZ15 13# ＞500 ＜1 ±1
0.8mL YZ15 13# ＞500 ＜1.6 ±1
1mL YZ15 13# ＞500 ＜2 ±1
2mL YZ15 14# ＞500 ＜1.1 ±1
3mL YZ15 14# ＞500 ＜1.65 ±1
5mL YZ15 19# ＞500 ＜1.68 ±1
8mL YZ15 16# ＞500 ＜1.2 ±1
10mL YZ15 16# ＞500 ＜1.5 ±1
20mL YZ15 25# ＞500 ＜1.43 ±1
50ml YZ15 17# ＞500 ＜2.11 ±1
I-BT101F Esebenzayo Yekhanda Lephampu neThubhu, Amapharamitha wokugeleza
Uhlobo LweDrayivu Ikhanda Lephampu Isiteshi Ishubhu (mm) I-Single Channle Flow Rate
I-BT101F I-DG (amarola ama-6) 1,2,4 I-Wall0.8-1,ID≤3.17 0.0002-49
I-DG (amarola ayi-10) 1,2,4 I-Wall0.8-1,ID≤3.17 0.0001-41
I-DT10-18 1 13#14#
I-DT10-28 2 13#14#
I-DT10-48 4 13#14#
YZ15 1 13#14#19#16#25#17# 0.006-420
YZ25 1 15#24# 0.16-420
YT15 1 13#14#19#16#25#17#18# 0.006-570
YT25 1 15#24#35#36# 0.17-720
I-WT300F Intelligent Dispensi...
I-BT100F Intelligent Dispensi...
I-WT600F Intelligent Dispensi...
I-BT601F Intelligent Dispensi...
I-BT301F Intelligent Dispensi...